Power Bank uye Inotakurika Chaja yeApple Tarisa | Ndinobva mac
Power Bank uye inotakurika charger yeApple Watch
Chimwe chezvipingamupinyi zvikuru zvezvinhu zvinotakurika ndezvekuti hupenyu hwezuva nezuva hwebheteri hushoma uye pane dzimwe nguva patinofanira kuzvidzosera kanopfuura kamwe pazuva. Iyo Apple Watch haizove shoma kunyangwe kubva pane yangu ruzivo rwekushandisa, bhatiri rayo rinotora avhareji yemazuva maviri akazara.
Kune vashandisi vanoda kudzoreredza chishandiso kunze kwemusha uye vasina mukana wekugona kushandisa induction tambo inouya nayo, tinokupa iwe ino inotakurika charger iyo panguva imwechete iri Power Bank.
Nhasi tinokupai charger yeiyo Apple Watch iyo ine hunhu hwekuti, pamusoro pekunge iri charger rutsigiro, ine mabhatiri emukati anoita kuti Apple Watch ichadzoreredza kubva pachigadziko chemadziro. Iyi charger inobva kuUgreen brand uye ine yakadzora kwazvo dhizaini.
Iri ndiro rakatanhamara rave rakagadzirirwa zvakanyanya Apple Watch saka paunongoburitsa mubhokisi iwe unozogona kurishandisa usingashandisi induction tambo yeiyo wachi. Kana iri nzira yaro yekushandisa, tinogona kuona bhatani repadivi iro kana tikamanikidzwa rinotizivisa, kuburikidza nemwenje yeLED, yehuwandu hwechaji iyo Power Bank inayo.
Kuti tiite recharge tine micro USB port, yatisinganzwisise parizvino sezvo zvaitarisirwa kuti pakuchinjisa zvakare yaizoshandisa USB-C kubatana. Zvirokwazvo ramangwana rekuvandudza rinosanganisira iyi nyowani tekinoroji. Kune rimwe divi rechishandiso isu tine USB 3.0 kuburitsa izvo zvinotibvumidza kushandisa iyi Power Bank kubhadharisa iPhone yedu, kunyangwe iine yayo 2200mAh haina kukwana kudzoreredza iyo iPhone 7 Plus.
Mutengo wayo $ 56,99 uye unogona kuiwana mu inotevera webhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Power Bank uye inotakurika charger yeApple Watch
Kugadzirisa maforodha anoonekwa mu macOS Dock